musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » New UNWTO Election Prediction Yakaburitswa neWTN
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Wtn
Rondedzero Yezvino Yevamiriri vachifunga nezveramangwana reUNWTO, World Tourism Organisation
World Tourism Sangano
Nhume dzinobva kunyika zana negumi nenhatu dziri kutarisirwa kuvhota pamusangano unotevera weUNWTO muMadrid kubva muna Mbudzi 113 kusvika Zvita 30. eTurboNews ikozvino ine fungidziro yakaburitswa neWorld Tourism Network. Kuverengera kuti inyika ngani dzichavhotera uye ingani dzinopesana nekusimbiswazve kweSecretary General inokurukurwa munyaya ino.
World Tourism Organisation (UNWTO) General Assembly iri kugadzirira kutanga muMadrid kubva muna Mbudzi 30 - Zvita 3.
Chinhu chinonyanya kutarisirwa chechirongwa ivhoti yakavanzika yekunzwa kwekusimbisa kwaZurab Pololikashvili kweimwe temu.
Vese vaviri vakambopfuura UNWTO Secretary Generals uye gumi nevaviri veazvino uye vekare vatungamiriri veWorld Tourism vari kukurudzira vamiriri kuti vavhote. HERE pakunzwa kwechiziviso chakavanzika.
Izvi zvakajekeswa mutsamba dzakavhurika dzakateedzana nevaimbove vakuru vakuru veUNWTO, Decency in the Election campaign by the World Tourism Network, uye neCosta Rica ichikumbira a vhoti yakavanzika nokuda kwekunzwa uku kwekusimbisa.
Sarudzo iyi yava mumaoko enhumwa dzichapinda mumusangano mukuru weGeneral Assembly svondo rinouya.
Zvinoenderana nefungidziro ichangobva kuburitswa yeWorld Tourism Network, tarisiro yekusimbisazve sarudzo yeSecretary General inomira sezvinotevera kubva muna Mbudzi 23.
Nyika dze7 dzinotarisirwa kusimbisa Zurab musarudzo dzakavanzika
Nyika makumi mana nenhatu dzinotarisirwa KUSA simbisa Zurab musarudzo dzakavanzika
Nyika makumi matanhatu nenhatu hadzisati dzave neruzivo rwekuti vovhota sei pasarudzo dzepachivande
2/3 yemavhoti inodiwa kusimbisa.
Kana pakange pasina humbowo, sarudzo itsva ine vanhu vachakwikwidza ichavepo. Maitiro chaiwo akatsanangurwa na eTurboNews mune ino chinyorwa:
Parizvino vamiriri vakanyoreswa kuUNWTO General Assembly iri kuuya
Kana iwe uri nhengo yeWorld Tourism Network, tinya pano kuti uwane a runyorwa rwevamiriri veUNWTO kuGeneral Assembly iri kuuya muMadrid 2021;
Jamaica Inotora Kumba Goridhe neSirivha muTravvy Awards
Tel Aviv kuenda kuDubai: ndege nyowani neEmirates
Vapfumi chete ndivo vachakwanisa kutenga mazororo mu...
Vanhu 8 vafa muhudyu muHouston mukurwisana ne...
Cancer uye COVID Tsvagiridzo: Basa reCytokines